Arati Lohorung: दाजुको बिहे पछीको कुरा .....
Posted by Arati at 3:47 PM
Aakar October 15, 2008 at 9:36 PM
अनि, बिहे चाँहि कुन दिन भा'को हो नि ??? अनि घरना रक्तपात भएन भन्न को मतलब " बली नदिएको" भन्न खोजेको हो ?
Arati October 16, 2008 at 8:20 AM
आकरजी 'दाजुको बिहेको प्रसङ्ग ' पढ्नु होला अनी मात्र थाहा हुन्छ रक्तपतको बारेमा अनी दाजुको बिहे चै सताइस र २८ गते भएको हो।
सेतो माकुरा October 18, 2008 at 8:08 PM
निकै रमाईलो भए जस्तो छ नि दाजुको बिहेमा ।
S Kafle October 20, 2008 at 7:42 AM
Arati October 20, 2008 at 3:01 PM
दाजुको बिहे त रमाइलो भयो नि ! सारी लाएर कुद् न सिकियो तर चप्पल चाँही फ् ल्याट मा है
@ sudip and sujan kafle
May be I will join some day...
Basanta October 23, 2008 at 12:33 PM
Congratulations to the newly wed couple and best wishes foravery happy married life.